चीनमा नयाँ महामारीको त्रास : सर्तकता अपनाउन आग्रह – Enepali News
चीनमा नयाँ महामारीको त्रास : सर्तकता अपनाउन आग्रह
July 6, 2020 251
चीनको स्वायत्त क्षेत्र भित्री मङ्गोलियामा एक व्यक्तिमा प्लेग संक्रमण पुष्टि भएपछि सरकारी निकायहरूले सावधानीका उपायहरू अवलम्बन गरेका छन्। सरकारी विवरणहरूका अनुसार बायान्नुरमा प्लेग देखिएका ती व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ र उनको स्थिति स्थिर छ । उनी गोठाला भएको बताइएको छ । अधिकारीहरूले चारमध्ये तेस्रो तहको चेतावनी जारी गरेका छन् ।
ब्याक्टेरियाको संक्रमणबाट हुने ब्यूबनिक प्लेग घातक बन्न सक्छ । तर उपलब्ध एन्टीबायोटिकको प्रयोगबाट उपचार सम्भव छ । बायान्नुरस्थित एउटा अस्पतालमा गएका ती व्यक्तिमा शनिवार प्लेग भएको आशंका गरिएको थियो । तर उनलाई कसरी संक्रमण भयो भन्ने स्पष्ट छैन । तेस्रो तहको चेतावनी जारी भएपछि प्लेग सार्न सक्ने जीवजन्तुको सिकार गर्न र तिनको मासु खान रोक लागेको छ । संक्रमण भएको शङ्का लागेमा अधिकारीहरूलाई सूचित गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरिएको छ ।
विश्वमा बेलाबेलामा प्लेग देखा परिरहन्छ । सन् २०१७ मा म्याडग्यासकरमा ३०० जनाभन्दा बढी मानिसमा प्लेग भएको थियो । गत वर्ष मे महिनामा चीनको छिमेकी देश मङ्गोलियामा दुई जनाको प्लेगका कारण मृत्यु भयो। मार्मट नामक जङ्गली जीवको काँचो मासु खाएपछि उनीहरूलाई प्लेग भएको थियो । त्यहाँ मार्मटको काँचो मासु र मिर्गौला खाँदा स्वस्थ भइने लोकविश्वास भएको मङ्गोलियाको राजधानीमा कार्यरत विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका एक अधिकारीले बताएका थिए । तर उक्त जीवको सिकार अवैध हो । मार्मटले प्लेग लगाउने सूक्ष्मजीव बोकेको हुन्छ र मङ्गोलियामा फेला परेका संक्रमितहरूसँग यसको सम्बन्ध देखिएको छ।
प्लेग भएपछि लिम्फ नोड अर्थात् जसीका ग्रन्थिहरू सुनिन्छन् । संक्रमण भएको तीन दिनदेखि सात दिनसम्म रुघाखोकीजस्तो समस्या देखिने हुँदा प्रारम्भिक चरणमा यो रोगको लक्षण चिन्न गाह्रो हुन्छ । तर ब्यूबनिक प्लेग महामारी बनेर फैलिने सम्भावना न्यून हुन्छ । ‘चौधौँ शताब्दीको तुलनामा अहिले यो रोग कसरी सर्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ,’ स्ट्यान्फर्ड हेल्थ केअरमा कार्यरत संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. शान्ति काप्पागोडाले बताइन् ।
‘यसको रोकथाम गर्ने तरिका हामीलाई थाहा छ। हामी संक्रमण भएका बिरामीको पनि प्रभावकारी एन्टीबायोटिक प्रयोग गरेर उपचार गर्न सक्छौँ।’ चौधौँ शताब्दीमा उक्त रोगका कारण अफ्रिका, एशिया र युरोपमा झन्डै पाँच करोड मानिसको मृत्यु भएको थियो ।
सन् १६६५ मा प्लेग महामारीका कारण लन्डनमा बसोबास गर्ने २० प्रतिशत मानिसले ज्यान गुमाएका थिए । उन्नाइसौँ शताब्दीमा चीन र भारतमा महामारी फैलिँदा एक करोड २० लाखभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको थियो ।
Prevभारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या ७ लाख नजिक (अपडेट)
Nextब्राजिलमा कोरोना संक्रमित १६ लाख नाघे
बोझो कुन कुन रोगको उपचारमा प्रयोग हुन्छ र कति भन्दा बढि खानु हुदैन ? सम्पुर्ण जानकारी